Kurema uye kurema kwaNataliya Vodyanova
Nyeredzi Encyclopaedia of Stars
Russian supermodel, philanthropist uye amai vevana vakawanda Natalia Vodyanova, vatsinhanana nemakore gumi, vanoramba vachiita sevasikana. Nehupamhi hwe176 cm Natalia Vodyanova inorema 50 kg, asi mufananidzo wacho pachako unotenda kuti zviri nani kuva bony kupfuura yakazara.
Iyo yakakwirira, kurema uye chimiro cha Natalia Vodyanova
Russian supermodel uye chiso cha L'Oréal Paris Natalia Vodianova anokwanisa kuva asina kunyanya kunyange panguva yekuzvitakura, uye mushure mokubereka mwana wake anonyangarika munguva yakanyorwa. Nehupamhi hwe 176 cm uye chiremera chechiedza Natalia Vodyanova anogamuchira zvido zveavo vanonyanya kugadzirisa.
Neyakakosha yemuenzaniso wekukura, zviyero zveNetaya Vodyanova nhamba ye 86.5x61x86.5, uye uremu hunosiyana pakati pe 45-50 kilogram. Kuti ave muhumiro, anocherechedza zvakakosha, "kupisa" kudya: kudya kwemazuva ano uye kudya kwemadiki kwezuva rose. Asi, kutarisa kuti mufananidzo unoshanda sei, haugoni kubatsira kufunga, asi iwe unonyatsoda chikafu ichi here? Nenzira yakadaro yehupenyu, hazvibviri kuwedzera kuwanda. Saka, somuenzaniso, mushure mokuberekwa kwechecheche mwana waakasvibisa kare zuva rechitanhatu mushure mekuberekwa.
Kukura uye kuyerwa kweNataliya Vodyanova - nyaya inogara ichikurukurwa mumutambo
Mumwe munhu anofunga nezvaNatalia amai vakanaka uye nyanzvi yemupiro, uye mumwe munhu haanetswi mukana wokumuti "hanger", "bhodi" nezvimwe zvipembenene zvakaipa. Ngatiti nhengo dzemusangano idzi dzichingova negodo rakakosha chiyero chekukwirira nekurema kwaNataliya Vodyanova? Hazvigoneki kuti mafashoni diva ane hanya nezvenyaya iyi - iye aine chimwe chinhu chaanoita.
Jennifer Lopez anotengesa at auction chikafu chake ne Met Gala 2018
Natalia Vodyanova akagovana naye social network nemifananidzo inofadza yaAntoine Arnaud nemwanakomana wake Maxim
Natalya Vodyanova akataura nezvekurera vana, kushanda semuenzaniso uye maonero ekutambudzwa
Pane imwe nguva mutori wenhau wemagazini "Russian Reporter" akabvunza Vodyanova kana "chikafu chemuviri" chaaifarira kumurume wake chakamubata, kana, semuenzaniso, Wikipedia inorondedzera zviyero zvemufananidzo wake . Natalia akapindura kuti haaoni chinhu chinoshungurudza mune izvi, nokuti ichi ndicho basa rake, nerubatsiro rwaanopa hupenyu hwake uye anobatsira vamwe.
Kukura Gillian Anderson
Kukura uye zvimwe zvikamu zveIvan Rheon
Kusvikira Lindemann achiri muduku
Diana Melison pamberi pepurastiki
Kit Harington yakakora - yechokwadi kana inofanirwa?
David Bowie achiri muduku
Kukura uye mamwe matanho Elizabeth Olsen
Eriya Wood's Growth
Kuwedzera, kuyerwa uye mamwe matanho Natalie Portman
Nicole Kidman akareba sei?
Shakira muhuduku hwake
Kukura uye kuyerwa kweChris Evans
Renee Zellweger zvakare akarova nekushandurwa kwekunze
Marilyn Manson akabvisa mbambo mbiri?
Boka rakabhururuka kumusoro - chiratidzo
Papillitis yemudumbu - chii ichocho?
Sweater ine zipper
Chii Chinonzi World Kiss Day?
Ndarama yegoridhe ne topazi
Ungagadzira sei machira nemaoko ako?
Courtney Love muhuduku hwake
Kuberekwa kwemavhiki makumi maviri nemaviri - kubata fetal
Zvikwata zvevakadzi vakadzidza - demi-msimu uye yechando mhando dzezviitiko zvose
Pie ne kabichi uye evha - iyo yakanakisisa mapepipesiti ekubheka zvisina kunwa muovheni kana mune mamiriyoni akawanda-
Ryan Reynolds akapa hurukuro yakajeka uye akava "Munhu wegore" maererano nemagazini GQ
Zuva rekuberekwa nenzira yeHarry Potter
Zvokudya zvinokonzera kuora muviri
Ngozi yeTrisomy 21
Bhizinesi rebhizimisi rakabata nemaoko
Chinese saladi - mapoka ekutanga ezvokudya zvinonaka zvekunakidza kwose!